ZTE Axon 10 Pro: निर्दिष्टीकरण, मूल्य र आधिकारिक सुरुवात | Androidsis
ZTE Axon 10 Pro: 5G को साथ ब्रान्डको पहिलो फोन
ईडर फेरेनो | | मोबाईलहरू, ZTE
ZTE बार्सिलोनाको MWC को २०१ edition संस्करण छुटाउन चाहँदैन। घटनामा, ब्रान्डले हामीलाई यसको नयाँ स्मार्टफोन एक्सन १० प्रोको साथ छोडिदियो। केही हप्ता पहिले यो उपकरणको टिप्पणी गरिएको थियो। MWC २०१ the को रूपरेखामा प्रस्तुत हुन गइरहेको थियो, केहि अन्तमा भएको छ कि। यो उपकरण ब्रान्डको लागि विशेष हो, किनकि यो G जीको साथ बजारमा पुग्न यसको दायराको पहिलो हुन्छ।
सुरुबाट, ब्रान्डले G जी मा अग्रगामीहरूमध्ये एक हुनको लागि आफ्नो इरादा देखायो। पहिले नै गत वर्ष उनीहरूले मोडेलहरू सुरू गर्ने योजनाहरूको घोषणा गरे यो बजार को समर्थन संग। यी फोनहरू मध्ये पहिलो अन्त्यमा आधिकारिक हो। किनकि जेडटीई एक्सन १० प्रो हाम्रो बीचमा छ. हामी फोनबाट के आशा गर्न सक्छौं?
Huawei Mate X को बाहेक अहिले सम्मका G जी स्मार्टफोनहरू जस्तै, उपकरण स्न्यापड्रैगन 855 XNUMX को साथ आउँछ तपाइँको प्रोसेसरको रूपमा। त्यसैले हामी तपाईंबाट प्रदर्शनको सर्तमा ठूलो शक्ति आशा गर्न सक्छौं।
1 निर्दिष्टीकरण ZTE Axon 10 प्रो
निर्दिष्टीकरण ZTE Axon 10 प्रो
डिजाइन को मामला मा, चिनियाँ ब्रान्ड एक प्रतिबद्ध छ पानी को एक ड्रप को आकार मा एक निशान संग स्क्रीन। त्यसैले यस सम्बन्धमा बजार प्रवृत्तिहरू अनुसरण गर्नुहोस्, यस xक्सन १० प्रोको साथ। प्राविधिक स्तरमा यो दायराको शीर्ष हो, जसमा ब्रान्डले मार्केटमा फिर्ता आउने आशा राख्दछ २०१ 10 मा अमेरिकी समस्याले भोगेका धेरै समस्याहरूपछि।
प्राविधिक विशिष्टता ZTE Axon 10 Pro
मोडेल एक्सन १० प्रो
अपरेटिङ सिस्टम Android 9.0 पाई
स्क्रिन AMOLED 6.4 Inch पूर्ण HD
आन्तरिक भण्डारण GB 128 जीबी (माइक्रोएसडीको साथ २512 जीबीसम्म विस्तार योग्य)
रियर क्यामेरा MP 48 MP + २० MP (विस्तृत) + टेलिफोटो x20
अगाडिको क्यामरा 24 सांसद
कनेक्टिविटी G जी ब्लुटुथ .5.० वाइफाइ 5.0०२.११ एसी एलटीई
अन्य सुविधाहरू स्क्रिनमा फिंगरप्रिन्ट रिडर एकीकृत
ब्याट्री द्रुत चार्जको साथ 4.300 एमएएच
आयामहरू १167.१ x x 72 x 8.2.१ मिमी
मूल्य अझै पुष्टि गरिएको छैन
यस एक्सोन १० ब्रान्डको प्रोमा हामी फेला पार्दछौं क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 855 XNUMX भित्र। यो एक X24 मोडेम को उपयोग गर्दछ, 4G का लागि जुन पहिले नै स्वदेशी रूपमा आउँदछ। जबकि X50 ले फोन बोर्डमा पालना गरेको छ, ता कि यो पहिले नै यसमा G जी जडान छ। चिनियाँ ब्रान्डको पहिलो उपकरण प्रयोगकर्ताहरूलाई यो समर्थन दिन।
GPU को लागि Adreno 640 उपकरणमा छनौट गरिएको छ, जसले यस सम्बन्धमा ठूलो शक्ति अनुमति दिन्छ। क्वालकॉमबाट कृत्रिम खुफिया इञ्जिनको अतिरिक्त। यो आशा गरिएको छ कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता पनि उपकरणको क्यामेरा मा एक उपस्थिति छ, त्यसैले तिनीहरू यस तरिका बाट बढाइनेछ।
फिंगरप्रिन्ट सेन्सर स्क्रीन अन्तर्गत एकीकृत गरिएको छ, हामी हाल एन्ड्रोइडमा उच्च-अन्तर्गत धेरै मोडेलहरूमा देखिरहेका छौं। योसँग अनुहार अनलक पनि छ, उपकरणको फ्रन्ट क्यामेरालाई धन्यवाद। अर्कोतर्फ, कम्पनीले स्मार्ट कुञ्जी वा इसारा नियन्त्रण जस्ता एन्ड्रोइड पाईको उपस्थितिको लागि केहि महत्वपूर्ण कार्यहरू शुरू गरेको छ।
ZTE Axon 10 Pro एक ट्रिपल रियर क्यामेराको साथ आउँछ। यस MWC २०१ in मा धेरै ब्रान्डले हामीलाई ट्रिपल रियर क्यामेराको साथ मोडलहरू छाडदैछ, जुन चिनी ब्रान्डसँग दोहोरिएको छ। मुख्य एक MP 2019 MP हो, जबकि हामीसँग २० MP चौडा कोण र तेस्रो त lyx अप्टिकल जुम छ, जसको रिजोलुसन अहिले थाहा छैन। थप रूपमा, कृत्रिम बुद्धिको लागि धन्यवाद हामीसँग यी क्यामेराहरूमा ब्लर मोड, अप्टिकल जूम, र गति क्याप्चर हुनेछ।
हामी यस उच्च-अन्तको एकल संस्करण फेला पार्दछौं, र्याम र आन्तरिक भण्डारणको सर्तमा। अहिलेको लागि, कम्पनीले हामीलाई यस ZTE एक्सन १० प्रोको लागि एक विशिष्ट रिलीज मिति दिएका छैन। यो भनिन्छ कि यो युरोपमा उपलब्ध हुनेछ। कहिलेकाँही वर्षको पहिलो छ महिनामा। यो सायद जूनमा आइपुग्नेछ, प्रस्तुत गरिएको अन्य models जी मोडेलहरू जस्तै।
हामीसँग मूल्यमा कुनै डेटा छैन तपाईंसँग यो नयाँ फ्ल्यागशिप हुनेछ स्टोरमा यसको आगमनमा। हामी यो र यसको रिलीज मितिको बारेमा छिट्टै सुन्न आशा गर्दछौं।
लेखको पूर्ण मार्ग: एन्ड्रोइडसिस » एन्ड्रोइड उपकरणहरू » मोबाईलहरू » ZTE » ZTE Axon 10 Pro: 5G को साथ ब्रान्डको पहिलो फोन
ग्यालक्सी A50: सामसु'sको नयाँ मध्य-दायरा
सामसु ग्यालेक्सी एस दायरा अर्को साल rebrand गर्न